5 Antony To Hitety Eoropa By Train Tamin'ny volana Desambra | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Antony To Hitety Eoropa By Train Tamin'ny volana Desambra
5 Antony To Hitety Eoropa By Train Tamin'ny volana Desambra
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 06/12/2019)
Misy zavatra mampino hanatanteraka momba mangina mijery avy any amin'ny fiaran-dalamby varavarankely, Tsy ny hevitrao? Noho izany, manadino momba ny fiarovana akaiky frisks, mazava Ziplock kitapo ho an'ny ranon-javatra, aotra ny fiainana manokana sy ny fidiovana-tsy busses. Tsy misy fomba tsara kokoa mba hijery Eoropa noho ny lamasinina tamin'ny Desambra. Ireto ny antony!
1. Hitety Eoropa lamasinina tamin'ny Desambra dia ho hitanareo – vitsy mpizaha tany
Maro ny olona mirohotra ho destinos nandritra Summer rehefa te-hijery Eoropa. Na izany aza, ny talaky masoandro Weather no mitondra izany, olona. Be dia be ny olona! Tianay mba hijery Eoropa lamasinina tamin'ny Desambra, satria misy vitsy fotsiny mpizaha tany. More toerana manodidina, filaminana, sy ny toerana ho anao!
2. Hitety Eoropa lamasinina ao amin'ny ririnina dia midika hoe – mora kokoa ny tahan'ny
Ny antony mahatonga antsika manana taha mora tsotra izao fa ny antony 1! Vitsy kokoa ny olona mitovy mora kokoa ny zava-drehetra! Isika dia miresaka mora trano fandraisam-bahiny ary rail tapakila amin'ny tany (na dia azo inoana fa tsy manodidina Noely /Taona vaovao).
A tendron'ny: Fihenam-bidy dia hita bebe kokoa amin'ny tanàna kely dia miankina amin'ny fizahan-tany. Mazava ho azy, tanàna lehibe kokoa no tsy tokony hiezaka mafy mba ho any amin'ny mpanjifa, toy izany drafitra amim-pahendrena raha ianao ao amin'ny teti-bola!
3. Tsena sy ny fety
Jereo ny lahatsoratra ao amin'ny awesome Ny tsara indrindra any Eoropa Festivals Ririnina raha toa ianao te Info bebe kokoa eo amin'ny Top Picks. Street Markets, manokana na aiza na aiza no tanteraka nandritra ny Desambra. Raha ny tena izy, dia efa fomban-drazana ny volana Desambra hatramin'ny 1400 ny! Ny hoe amin'ny fiaran-dalamby dia midika hoe manovaova, toy izany no tokony hanapa-kevitra fa tsy maintsy mijanona fotsiny amin'ny iray intsony hitanao tena tia, dia afaka! Izany ny hatsaran-tarehy ny fiaran-dalamby mandeha. Izany no antony tsy misy fomba tsara kokoa mba hijery Eoropa noho ny lamasinina tamin'ny Desambra.
4. rivotra iainana
Raha efa nahita ny sarimihetsika Noely, misy ny maintsy ho mahagaga sary hoso-doko ao amin'ny habakabaka. Sary kely mianjera bohabohan'orampanala, ankizy mitoraka snowballs, Icicles, ny muffled crunch ny mandeha amin'ny alalan'ny ranomandry matevina. Ary mazava ho azy, ny jiro sy ny haingon-trano! Misy -toeran-kafa fa mpifanandrina ny fampisehoana hahita any amin'ny ankamaroan'ny faritra Eoropa.
5. Mikaroha eropeana amin'ny lamasinina amin'ny volana desambra = Sakafo ririnina
Inona no fomba tsara mba hijery sakafo samy hafa firenena tsy maintsy atolotra? Hitety Eoropa lamasinina tamin'ny Desambra, ary manana ny fahafahana hitsidika tanàna maro ao anatin'ny iray andro. Zahao hoe an-toerana tsena ary hitondra ny sasany tsakitsaky indray ny fiaran-dalamby! Afaka manana sakafo maraina, sakafo atoandro, sy ny Fiaraha-misakafo in 3 tanàna samihafa!
Soso-kevitra: In Soisa sy ny faritra Frantsa, manandrana raclette sy ny fondue, na ny izay miorina manodidina faly fromazy. Alemà tahaka ny handrava ny nankafy rehefa mahazo mangatsiaka, ary natono chestnuts dia mpivarotra foto amin'ny Noely tsena. Aza adino ny hanafatra ny lafiny mulled divay!
Vonona ny boky vao nandeha lamasinina ny androm-piainany? lehibe! Lohany ho amin'ny SaveATrain ary mankafy ny manahirana sy famandrihana-maimaim-poana Train Tsidika!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexplore-europe-train-december%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#DesambraHolidays Noely ChristmasbyTrain europetravel Food holidayeurope longtrainjourneys Train Travel traveltips
Teknolojia Ary Travel